Ahoana ny fomba hamoronana lisitra fivarotana mailaka tsara kokoa amin'ny alàlan'ny media sosialy | Martech Zone
Ny marketing amin'ny mailaka dia fitaovana iray malaza hanatonan'ireo mpivarotra olona mety ho mpanjifa hatramin'ny nananganana an'ity medium ity tamin'ny taona 1990. Na dia amin'ny famoronana teknika vaovao kokoa toy ny media sosialy, influencer ary marketing amin'ny atiny aza, ny mailaka dia mbola heverina ho mahomby indrindra arakaraka fanadihadiana mpivarotra 1,800 notarihin'ny Smart Insights sy GetResponse.
Na izany aza, tsy midika izany fa ny fanao tsara indrindra amin'ny marketing amin'ny mailaka dia tsy nivoatra tamin'ny teknolojia vaovao. Misaotra ny haino aman-jery sosialy misy fomba izao hanatsaranao tsara ny kalitaon'ny lisitry ny varotra mailakao ankoatry ny endrika fidirana an-tranonkala fotsiny sy ny fividianana ny lisitry ny antoko fahatelo.
Ireto ambany ireto ny fomba dimy ahafahanao mampiasa media sosialy hanatsarana ny kalitaon'ny lisitry ny mailakao manomboka amin'ny teknika fototra ka hatramin'ny farany.
Asaivo miampita fantsona ireo mpanaraka haino aman-jery sosialy
Ny fomba tsotra indrindra hampiakarana ny lisitry ny mailakao amin'ny media sosialy dia ny famporisihana ireo namanao media sosialy, mpanaraka anao ary ny fifandraisana mba hisoratra anarana amin'ny lisitry ny mailakao. Toa hita miharihary ity iray ity, saingy orinasa maro no tsy manelingelina ny fanarahana sy ny fidirany amin'ny làlan-kizorana samihafa.
Aza mieritreritra fa ireo mpanaraka ny media sosialy dia olona mitovy amin'ny an'ireo ao amin'ny lisitry ny mailakao. Aza soratana koa ny lanjan'ireo namanao media sosialy satria tsy manam-pahefana hanapa-kevitra na hanan-kery amin'ny fanapahan-kevitra momba ny varotra ianao. Raha ny zavatra niainako dia tsy marina izany.
Mamorona fanentanana amin'ny haino aman-jery sosialy izay mitondra mankany amin'ny pejy fisoratana anarana ao amin'ny tranonkalanao. Ho gaga ianao fa firy kalitao no hitarika anao hisoratra anarana amin'ny alàlan'ny tranonkala toa ny Twitter, Facebook ary LinkedIn raha mampiditra matetika ny mpampiasa sosialy amin'ny resaka lohahevitra sy ny atiny ampiana lanjany. Zava-dehibe ihany koa, raha toa ka miaraka aminao matetika amin'ny media sosialy ireo olona ireo dia azo inoana kokoa fa hanokatra sy hamaky ny mailakao ireo.
Mitondra fitarihana ireo mpijery Facebook ny fisokafan'i Lookalike miafina
Miaraka amin'ny media sosialy, ny lisitry ny mailaka misy anao ankehitriny dia tsy mampifandray anao amin'ireo olona manokana fotsiny. Manokatra dobo marobe mety hitarika olona mitovy amin'izany amin'ny Facebook koa izy io Fampisehoana mpihaino manokana.
Ny fampiasana ny endri-javatra dia tsotra. Ny sisa ataonao dia ny mampakatra na mandika ary apetaho ireo lisitry ny lisitry ny mailaka avy amin'ny takelaka. Avy eo tery ny mpihaino anao manokana amin'ny alàlan'ny toetra mampiavaka azy, toy ny taona sy ny fahalianana, ary lazao amin'ny Facebook fa mitady a mpijery mijery.
Avy eo dia hitrandraka ny angon-drakitra manokana Facebook mba hahitana olona manana toetra mitovy amin'ireo mpamandrika lisitry ny mailaka ankehitriny. Mamorona doka kendrena handresena lahatra ny mpikambana ao amin'ny mpihaino anao toa ny tsindrio ary mankany amin'ny pejy fipetrahana eo amin'ny tranokalanao toy ny tamin'ny tendrony teo aloha.
Mampiasà media sosialy hitadiavana adiresy mailaka
Azonao atao ihany koa ny mampiasa tahony haino aman-jery sosialy mba hahitana ny adiresy mailaka miasa amin'ny fitarihana amin'ny fampiasana teknika mora, saingy somary mandroso kokoa, antsoina hoe appending data.
Ny fampidirana data ho an'ny marketing amin'ny ankapobeny dia fampiasana serivisy antoko fahatelo hamenoana ny banga (toy ny lohatenin'ny asa na adiresy mailaka iasana) ho an'ny fampahalalana momba ny fifandraisan'ny mpitarika anao. Ny orinasa sasany izay manampahaizana manokana amin'ity faritra ity dia misy an'i Sellhack, Clearbit ary Pipl (toerana iasako).
Ohatra, ao amin'ny Fikarohana an'i Pipl, ny mpampiasa dia afaka mampakatra lisitra misy ny anaran'ny firaka sy ny fikirakirana media sosialy ary misintona ny lisitra miaraka amin'ireo adiresy mailaka tsy hita nanampy azy.
Ireo serivisy ampiana data ireo dia azo ampiasaina mitadiava adiresy mailaka ho an'ny fitarihana mety ho hita amin'ny alàlan'ny fihainoana ara-tsosialy. Mba hialana amin'ny maha-spam anao anao dia alao antoka fa manome safidy opt-out mazava ianao rehefa manatona ireo olona ireo.
Hamarino ny lisitry ny mailakao raha tsy misy media sosialy
Zava-misy mampalahelo amin'ny marketing mailaka fa olona an-jatony isan-jato no hisoratra anarana amin'ny lisitry ny mailakao amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka sandoka. Tsy mandany ny fotoananao fotsiny ny fandefasana mailaka amin'ireto adiresy ireto, fa mailaka be loatra koa amin'ny farany no hitarika ny mpanome tolotra mailaka anao hanome anarana anao hoe spambot ary sakano ny kaontinao.
Afaka mampiasa vidiny mifaninana maromaro ianao serivisy fanamarinana mailaka hamongorana ireo mailaka sandoka, ao anatin'izany Neverbounce, BriteVerify, Validator mailaka marobe, Validator mailaka ary Kalitaon'ny data momba ny fanandramana.
Matetika kokoa, ny olona dia hampiasa kaonty mailaka azy manokana na adiresy iray izay tsy zakan'izy ireo matetika avy amin'ireo mpamatsy toa an'i Gmail sy Yahoo mameno takelaka fifandraisana. Izany dia mahatonga ny fifandraisana marina amin'ireo olona ireo ary ny fahaizana mitarika dia sarotra kokoa.
Soa ihany, serivisy toa Adiresy vaovao ary Data momba ny tilikambo dia hanampy anao hahita ny adiresy mailaka tian'ireo mpanjifa sy ny mailaka mety hamaly ny tolotra miorina amin'ny isa fanaovana hetsika.
Raha tsy izany, azonao atao ny mampiasa ny haino aman-jery sosialy sy ny adiresy mailaka taloha Pipl's People Data API hahita adiresy mailaka hafa sy miasa. Ny tahirin-tantara ara-tantara misy stamp amin'ny mailaka dia tokony hanome anao hevitra raha toa ka misy mailaka ampiasaina ary mety anaram-piasana sy fampahalalana matihanina hafa mba hanatsarana ny lohany.
Ny lakilen'ny famaritana hoe iza amin'ireo karazana serivisy telo ireo no mampitaha ny vidiny, ny tahan'ny lalao ary ny fampifanarahan'ny teknolojia azy ireo amin'ny volavola sy ny tanjon'ny lisitry ny firaketanao.
Tombony azo amin'ny fifaninanana mora
Ny tena zava-dehibe dia mendrika ny ho lasa mamorona amin'ny fampiasana teknolojia vaovao hanatsarana ny kalitaon'ny lisitry ny varotra mailakao sy ny tahan'ny resak'izy ireo. Ny fahitana iray hafa tamin'ny fanadihadiana tamin'ny 2015 Smart Insights dia ny vitsy an'isa (53%) amin'ireo mpivarotra ihany no nampiasa fitaovana mitarika sy fananganana lisitra hanatsarana ny habeny sy ny fahombiazan'ny fitarihan'izy ireo. Betsaka ny mpivarotra (latsaky ny 25%) no mampiasa paikady sosialy na votoaty hananganana fitarihana kalitao. Omeo tombony amin'ny fifaninanana ianao. Ny fanaovana io dingana fanampiny io dia mety ho tsotra ihany.
Tags: BriteVerifympamaritra mailaka betsakakaonty mailakampamaritra mailakafanamarinana mailakakalitaon'ny data momba ny fanandramanaadiresy vaovaopiplpipl data apihaino aman-jery sosialyangon-drakitra
Apr 28, 2017 amin'ny 6: 53 AM
Hey, misaotra tamin'ny fizarana fampahalalana tena ilaina momba ny Marketing amin'ny mailaka. Faly mahita ireo bilaoginao hafa momba ny serivisy ampidirina mailaka.